CUA sy mpitatitra: nalana ireo mpivarotra eny amin’ny fiantsonan’ny taksibe | NewsMada
CUA sy mpitatitra: nalana ireo mpivarotra eny amin’ny fiantsonan’ny taksibe
Taorian’ny fihaonan’ny ben’ny Tanànan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), Ravalomanana Lalao sy ireo matihanina eo amin’ny sehatry ny fitaterana eto an-dRenivohitra, ny talata teo, nisy ny ezaka natao amahana ny olan’ny mpitatitra. Niditra avy hatrany tamin’ny fanalàna ny mpivarotra amin’ny toerana fiantsonan’ny fiara mpitatitra ny kaominina.
Nasiana ny familian-dalana na “deviation”, fanohizana ny fametahana ireo takelaby famantarana, fijerena ireo toerana tena be fitohanan’ny fiarakodia… Misy kosa ireo fangatahana izay mila fanapahan-kevitry ny mpanolotsainan’ny tanànan’Antananarivo, amin’ny volana febroary ho avy izao.
Anisan’izany ny resaka” licence”. Ankoatra izany, olana goavana sedrain’ireo mpitatitra ny faharatsian’ny lalana eto Antananarivo Renivohitra. Tsy mijery fotsiny izany ny CUA fa manao izay vitany amin’ny fanapenana ny lavadavaka.
Anjaran’ny minisiteran’ny asa vaventy kosa no tena manamboatra izany. Koa rehefa mitsangana ny fitondràna vaovao dia hisy ny fiarahana mitaky amin’ny minisitera misahana izany ataon’ny mpitatitra sy ny kaominina.
Naneho ny fahavononany hiaraka hiasa amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ireo mpitatitra, mba ho tombontsoan’ny rehetra . Hisy araka izany ny fihaonana matetika ho fanatsarana sy fanatevenana izay fiaraha-miasa izay.